Kinetic kunye namandla anokubakho: iimpawu, umahluko kunye nokubaluleka | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 11/05/2022 12:00 | Uqeqesho
Amandla eKinetic ngamandla anxulumene nentshukumo kwaye amandla anokubakho ngamandla anxulumene nendawo kwinkqubo. Ngokubanzi, amandla kukukwazi ukwenza umsebenzi. Zombini amandla e-kinetic kunye namandla anokubakho amele iindidi ezimbini zamandla akhoyo. Nawaphi na amanye amandla yinguqulelo eyahlukileyo yamandla anokubakho okanye amandla ekinetic okanye indibaniselwano yazo zombini. Umzekelo, amandla oomatshini adityanisiwe Kinetic kunye namandla anokubakho.
Kweli nqaku, sikuxelela yonke into okufuneka uyazi malunga ne-kinetic kunye namandla anokubakho, iimpawu zayo kunye nemizekelo.
1 Kinetic kunye namandla anokubakho
1.1 Amandla eKinetic
1.2 Amandla eKinetic
2 Asebenza njani amandla ekinetic?
3 Iindidi zamandla anokubakho
3.1 amandla omxhuzulane anokubakho
3.2 elastiki amandla anokubakho
3.3 amandla anokubakho kwikhemikhali
3.4 amandla anokubakho e-electrostatic
Amandla eKinetic luhlobo lwamandla ahambelana nentshukumo. Yonke into ehambayo inamandla ekinetic. Kwi-International System (SI), iyunithi yamandla e-kinetic yi-jouje (J), eyiyunithi efanayo nomsebenzi. Ijoule enye ilingana ne-1 kg.m2/s2. Kukho imizekelo emininzi yokusetyenziswa kwamandla e-kinetic kubomi bemihla ngemihla.
Ukubhowula: I-Bowling ngumntu ophosa ibhola ye-3-7kg ukuze awise izikhonkwane ezili-10, ezisekelwe kumandla e-kinetic aphethwe yibhola, exhomekeke kubunzima kunye nesantya sebhola.
Umoya: Umoya awuyonto ngaphandle komoya ohambayo. Amandla ekinetic entshukumo yomoya anokuguqulwa abe ngumbane kusetyenziswa iiinjini zomoya.
Amandla obushushu: Amandla e-Thermal ngamandla e-kinetic ahambelana nentshukumo ye-microscopic yamasuntswana kwinkqubo. Xa sifudumeza amanzi okanye nayiphi na enye into, songeza amandla e-kinetic ngokugqithisela ubushushu.
Amandla anokwenzeka luhlobo lwamandla anxulumene nendawo ehambelanayo ngaphakathi kwenkqubo, oko kukuthi, indawo yento enye ngokubhekiselele kwenye. Oomazibuthe ababini abahlukeneyo banamandla anokubakho xa kuthelekiswa nomnye. Kwi-SI, iyunithi yamandla anokubakho yijouje (J), njengamandla ekinetic. Ijoule enye ilingana ne-1 kg.m2/s2.
Uninzi lwemithombo esiyisebenzisayo ukwenza amandla ixhomekeke kumandla anokubakho.
Amandla agcinwe kumadama: Amanzi agcinwe kwindawo ephakamileyo, njengedama, anamandla omxhuzulane. Xa amanzi esiwa, aguqula amandla anokubakho abe ngamandla ekinetic akwazi ukwenza umsebenzi kwiiinjini zomoya ezikumazantsi edama. Umbane oveliswa zezi turbines usasazwa kuthungelwano losasazo lwasekhaya.
Imithombo: Xa intwasahlobo isoluliwe okanye ixinzelelwe, igcina umlinganiselo othile wamandla ngendlela yamandla anokulastiki. Xa intwasahlobo ikhutshwa, amandla anokuthi agcinwe aguqulwa abe ngamandla e-kinetic.
Guqa kwaye ukhombe: Isaphetha kunye notolo ngumzekelo wendlela amandla anokuthi ajike abe yi-kinetic energy. Xa umtya womnsa woluliwe, umsebenzi owenziweyo ugcinwa kumtya owoluliweyo njengamandla anokubakho. Xa ukhulula umtya, amandla anokubakho omtya aguqulwa abe ngamandla e-kinetic, athi ke adluliselwe kwitolo.
Umbane: Umbane luhlobo lwamandla anokubakho agqitywe yindawo yeentlawulo kwinkqubo (indawo yombane).
Asebenza njani amandla ekinetic?
Xa into ishukuma kungenxa yokuba inamandla ekinetic. Ukuba ingqubana nenye into, inokudlulisa la mandla kuyo, ngoko ke into yesibini nayo iyahamba. Ukuze into ifumane intshukumo okanye amandla ekinetic, umsebenzi okanye amandla kufuneka asetyenziswe kuyo.
Ixesha elide lisetyenziswa amandla, sikhulu isantya esiphunyezwa yinto ehambayo kunye namandla ayo e-kinetic. Ubunzima bukwanxulumene namandla entshukumo. Ubukhulu bobunzima bomzimba, amandla amakhulu e-kinetic. Iyakwazi ukuguqulwa ngokulula ibe bubushushu okanye ezinye iintlobo zamandla.
Phakathi kweempawu zamandla ekinetic esinazo:
Ngenye yezibonakaliso zamandla.
Inokudluliselwa ukusuka komnye umzimba ukuya komnye.
Inokuguqulwa ibe kolunye uhlobo lwamandla, umzekelo, ibe yi-thermal energy.
Kufuneka usebenzise amandla ukuze uqalise intshukumo.
Kuxhomekeke kwisantya kunye nobunzima bomzimba.
Isimbuku se-kinetic kunye namandla anokubakho avelisa amandla omatshini (amandla anxulumanisa indawo ekhoyo into nokushukuma kwayo). Njengoko bekutshiwo ngaphambili, Intshukumo ibhekisa kwintshukumo. Okunokwenzeka kubhekisa kumthamo wamandla agcinwe emzimbeni xa uphumle.
Ngoko ke, amandla anokubakho aya kuxhomekeka kwindawo yento okanye inkqubo ngokubhekiselele kwintsimi yamandla ejikelezayo. Amandla eKinetic axhomekeke kwintshukumo yento.
Iindidi zamandla anokubakho
amandla omxhuzulane anokubakho
Amandla omxhuzulane achazwa njengamandla ento enkulu xa intywiliselwa kumhlaba womxhuzulane. Iindawo zokutsalwa komhlaba zenziwe malunga nezinto ezinkulu kakhulu, njengobuninzi bezijikelezi-langa nelanga.
Ngokomzekelo, i-roller coaster inamandla aphezulu kakhulu kwindawo ephezulu ngenxa yokucwiliswa kwayo kwintsimi ye-gravitation yomhlaba. Nje ukuba imoto iwe kwaye ilahlekelwe ukuphakama, amandla anokuthi aguqulwe abe yi-kinetic energy.
elastiki amandla anokubakho
Amandla anokubakho e-elastic anxulumene neempawu ezinwebekayo zento, oko kukuthi, ukuthambekela kwayo ukubuyela kwimo yayo yantlandlolo emva kokuba iphantsi kwamandla oguquko angaphezu kokuxhathisa kwayo. Umzekelo ocacileyo wamandla anwebekayo amandla aphethwe yintwasahlobo, eyandisa okanye inkontileka ngenxa yamandla angaphandle kwaye ibuyele kwindawo yayo yokuqala xa amandla angaphandle engasasetyenziswa.
Omnye umzekelo yinkqubo yesaphetha kunye notolo, xa isaphetha sitsalwa ngeentsinga ezilastiki, amandla anamandla e-elastic afikelela kwinqanaba eliphezulu, agobe kancinci umthi, kodwa isantya sihlala singu-zero. Ngephanyazo elilandelayo, amandla anokubakho aguqulelwa kumandla ekinetic kwaye utolo ludubula ngesantya esipheleleyo.
amandla anokubakho kwikhemikhali
Amandla anokubakho kwimichiza ngamandla agcinwe kwiikhemikhali zebhondi zeathom kunye neemolekyuli. Umzekelo yiglucose emzimbeni wethu, leyo igcina amandla anokuba ngamachiza aguqulwa ngumzimba wethu (ngenkqubo ebizwa ngokuba yi-metabolism) kumandla obushushu ukugcina ubushushu bomzimba.
Okufanayo kuya kumafutha efosili (i-hydrocarbons) kwitanki yegesi yemoto. Amandla ekhemikhali anokubakho agcinwe kwiibhondi zekhemikhali zepetroli aguqulwa abe ngamandla omatshini anika amandla isithuthi.
amandla anokubakho e-electrostatic
Kumbane, ingcamango yamandla anokubakho iyasebenza, enokuthi iguqulelwe kwezinye iindlela zamandla, ezifana kinetic, thermal okanye ukukhanya, kunikwe ukuguquguquka okukhulu kwe-electromagnetism. Kule meko, amandla avela kumandla ombane owenziwe ngamaqhekeza ahlawulisiweyo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga ne-kinetic kunye namandla anokubakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » ngokubanzi » Uqeqesho » Kinetic kunye namandla anokubakho